ShanduraMore: Shandura Zvimwe Zvekushanya Webhusaiti Neiyi Foni Callback Widget | Martech Zone
ShanduraMore: Shandura Zvimwe Zvekushanya Webhusaiti Iine Iyi Runhare Callback Widget
Muvhuro, Zvita 27, 2021 Muvhuro, Zvita 27, 2021 Douglas Karr
Sezvo iwe uchiona analytics yesaiti yako, chinhu chimwe chaunogara uchitsvaga kuita kuwedzera shanduko yevashanyi. Zvemukati uye chiitiko chikuru chemushandisi chinogona kutyaira kubatikana pane saiti, asi izvo hazvifanire kuvhara mukaha uripo pakati pekuita uye kutyaira chaiko shanduko. Kana vanhu vachida kubatana newe pachako, uri kuvagonesa here?
Isu tine vatengi vakati wandei ikozvino tiri kuita otomatiki karenda majeti uko vashanyi vanogona kuzvishandira uye kugadzira yavo yekugadzwa pamhepo kana vasingade kutaura nemumwe munhu nekukasika. Asi zvakadini kana vachida kukubata nekukurumidza? Kunze kwechat majeti, imwe sarudzo yaungade kuyedza ndeye callback widget.
ConvertMore inopa mhinduro yakapusa yekugadzira yekufonera popup pane yako saiti. With ConvertMore unogona kugadzira:
Yenguva Popup -seta popup yakatarwa kuti ioneke mushure mekunge mushandisi apedza imwe nguva pane peji rako. Iwe unogona kuseta iyo nguva kuitira kuti ugone kubata mutengi wako mukati memasekondi mashoma ekutanga pane saiti, vasati vavhiringidzwa uye vasiya saiti yako.
Buda Popup - Iyo Exit Popup inoonekwa kana ConvertMore's proprietary tracking system, inoteedzera mbeva yevashandisi vako ichitenderera pamusoro pebhatani rekubuda riri papeji rako. Iwe unogona kuseta tsika yekupa kune mutengi wako kuti avaite kuti vachinje pfungwa dzavo uye vakufonere pane kusiya webhusaiti yako.
Floating Button -Iri bhatani rinoyangarara pazasi pemudziyo wemushandisi pavanenge vachitsvaga yako saiti. Sezvo pamusoro pe55% yemibvunzo yepamhepo inobva kuvashandisi venharembozha, izvi zvinovapa sarudzo yekukufonera zviri nyore mukati menguva yavo yekubhurawuza webhusaiti yako.
ConvertMore ine mitengo yakapfava kwaunongobhadhara chete kana kufona kwagadzirwa, majeti acho anonyatso gadzirisa kurudzi rwako, uye une dhibhodhi rakazara rekutarisa mitengo yako yekushandura mafoni.
Dzidza Zvakawanda Kubva ConvertMore
Tags: kufona kutendeukafonera shanduko dashboardcallback widgettinya-kufonaconvertmorekubuda chinangwa popupkubhadhara pamutungamirifoni yekudzosera widgetnguva popup
PowerChord: Centralized Local Lead Management uye Distribution yeDealer-Distributed Brands
Shoutcart: Nzira Yakareruka Yekutenga Kusheedzera Kubva KuSocial Media Influencers